China otomatiki epanyama centrifugal kurapwa kwemvura dehydrator fekitori uye vagadziri | Zhengxing Mechan
otomatiki epanyama centrifugal kurapwa kwemvura dehydrator
Muchina uyu uchapa mhinduro yakanakisa yegirazi yekugadzira indasitiri. Inogona kupatsanura girazi poda rakagadzirwa nemucheto kugadzirisa, kuwedzera nguva yemuchina, kudzikisa nguva yekuchengetedza, kudzikisa kushandiswa kwemvura uye kudzivirira pasi redu rinokosha.Iyi sludge dehydrator inotora tekinoroji yecentrifugal. Bhariri rinotenderera nekumhanya, panguva iyoyo mvura yemadhaka yakasvinirwa mukati megomba nepombi yemvura uye inosasa kunze nekumhanya kwakanyanya kwema centrifugal kufamba. Mvura yakachena inoyerera ichidzokera kutangi remvura.
Muchina uyu uchapa mhinduro yakanakisa yegirazi yekugadzira indasitiri. Inogona kupatsanura poda yegirazi inogadzirwa nemucheto kugadzirisa, kuwedzera nguva yemuchina, kudzikisa nguva yekuchengetedza, kudzikisa kushandiswa kwemvura uye kuchengetedza pasi redu rinokosha.
Iyi sludge dehydrator inotora tekinoroji yecentrifugal. Bhariri rinotenderera nekumhanya, panguva iyoyo mvura yemadhaka yakasvinirwa mukati megomba nepombi yemvura uye inosasa kunze nekumhanya kwakanyanya kwema centrifugal kufamba. Mvura yakachena inoyerera ichidzokera kutangi remvura. Iyo sludge yakachena system inogona kukwenya iyo sludge kunze kwemukati pevhu redhira otomatiki. Muchina uyu une hunhu hwehoriyamu hombe, yakanyanya kupera mvura mvura mwero, kudedera kudiki, ruzha diki, mashandiro ari nyore uye chengetedzo. Ndezvezvakatipoteredza-zvine hushamwari nekuderedza kusvibiswa kwemvura uye chengetedza mutengo wekurasa mushonga wekurapa mvura.
Muchina uyu unoshandisa nzira yemuviri kupatsanura chidimbu nemvura. HAPANA Kuda Chemical inogwamba zvinhu.
Sludge kukwesha system
Bharari muhombe kumhanya: 150-2850 R / min
Max. Kugadzira kuyerera 100L / min
Kakawanda: 5-60 HZ
Huremu hwese: 500kg
Simba Rese: 2.2kw
Kunopindirana Dimension: 1.58mx1.56mx0.8m
Sefa kuita > 90% yecheturu yakakura kupfuura 10u
Pashure: PLC inodzorwa yakatwasuka girazi sandblasting muchina mashandiro ari nyore
Zvadaro: yakatetepa yakaderera-e girazi muchina wekuwachisa mweya blade system
Dewatering Sludge Dehydrator Muchina
Girazi Powder Inosuka
Nharembozha Sludge Dehydrator Sisitimu
Sludge Dehydrator Mabhegi